जापानमा बच्चा जन्माउँदा के गर्ने ? – Todays Nepal
जापानमा रहनुहुन्छ र सन्तान जन्माउने याेजनामा हुनुहुन्छ अथवा जन्माउँदै हुनुहुन्छ भने केही कुराहरु तपाइँले अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । जापानमा सन्तान जन्माउनकाे लागि अस्पतालकाे प्रशुती गृहमा जानुपर्ने हुन्छ । गर्भधान रहेकाे शुरुकाे अवस्थामा नै अस्पतालमा गएर तपाइँले नाम दर्ता गर्नुहाेस् । अाफूलाई पायक पर्ने अस्पतालकाे बारेमा तपाइँ बस्नुभएकाे वडा कार्यालयबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यतिमात्र नभएर वडा कार्यालयबाट तपाइँले अावश्यक परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ । तपाइँ बस्नु भएकाे वडा कार्यालयमा तपाइँले सूचना दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई जापानी भाषामा निन्सिन ताेदाेके भनेर भनिन्छ । निवेदनकाे प्रकृया पूरा भएपछि तपाइँले मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका प्राप्त गर्नुहुनेछ । त्यसलाई जापानीमा बाेउसी केन्काेउ तेच्याे भनेर भनिन्छ । यस पुस्तिकामा अामा र बच्चाकाे स्वास्थ्य अवस्था अनि प्रगतिबारेमा उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । यसलाई सुरक्षित राख्नुहाेस् । गर्भवतीकाे स्वास्थ्य जाँच सहयाेग टिकट इत्यादि पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ । त्यसाे त याे टिकट गर्भवतीकाे स्वास्थ्य जाँच र शिशु जन्म हुँदा लाग्ने खर्चकाे फिर्ती रकम दिने टिकट हाे । हाल जापानमा बसाेबास गर्ने विदेशीहरुकाे संख्या बढेसँगै विभिन्न वडा कार्यालयहरुले विदेशी भाषामा पनि मातृशिशु पुस्तिका प्रकाशन गरेका छन् ।
जापानमा वच्चा जन्माउनकाे लागि लगभग ५० मान येन लाग्दछ तर स्वास्थ्य बीमा गरेकाे खण्डमा सुत्केरी भत्ता रकम करीव ४२ मान जति भुक्तानी फिर्ता पाईने हुँदा केही मात्रामा राहत हुने हुन्छ । यसकाे लागि अस्पतालकाे साेधपुछ शाखामा अग्रिम प्रक्रिया गर्नुहाेला । यति भईसकेपछि तपाइँ वच्चा जन्माउनकाे लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ । वच्चा जन्मेपछि कसरी स्याहार सुसार गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका तालिमहरु पनि वडा कार्यालयहरुले उपलब्ध गराउँछन् । त्यस तालिममा तपाइँले भाग लिनुपर्ने हुन्छ । जापानमा बच्चा जन्माउनकाे लागि अस्पतालमा करीव ५ दिन जति भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ । तपाइँकाे वच्चा जन्माउने दिन नजिकिंदै गर्दा भर्ना हुनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरु तयारी अवस्थामा राखी सुत्केरी वेथा लागेकाे अवस्थामा कसरी अस्पतालसम्म जाने भन्ने कुरामा जानकार भई तयारी अवस्थामा रहनुहाेला ।
शिशु जन्मेपछि के गर्ने त ?
नवजात शिशु जन्मेपछि जन्मेको १४ दिनभित्र तपाइँले तपाइँ बस्नु भएकाे वडा कार्यालयमा गएर बच्चाकाे जन्म दर्ता गराइ सक्नुपर्ने हुन्छ । जापानी भाषामा यसलाई स्युस्सान ताेदाेके पेश गर्ने भनेर भनिन्छ । वडा कार्यालयमा दर्ताकाे प्रक्रियासँग तपाइँले बच्चाकाे स्वास्थ्य जाँचकाे प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य वीमा कार्ड पनि बनाउनुहाेला । स्याेनि इर्योह्याे「小児医療証」यस्ताे लेखिएकाे कार्ड बच्चाकाे निःशुल्क उपचार गराउन मिल्ने कार्ड हाे । त्यसैगरी वडा कार्यालयले काेदाेमाे तेअातेकाे पनि व्यवस्था गरेकाे हुनाले त्यसकाे लागि पनि तपाइँले अावेदन दिन नभुल्नुहाेला । वच्चाकाे भत्ता वडा कार्यालय, सिटी अफिस लगायतका नियम अनुसार फरक हुन सक्छन् । त्यसाे त तपाइँले काम गर्ने कम्पनीमा पनि वच्चाकाे जन्म दर्ता गराउनुहाेला । त्यसैगरी तपाइँकाे वच्चा जन्मेपछि जन्म सम्पर्क पुस्तिका पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ । याे नवजात शिशु मातृशिशु पुस्तिकासँगै तपाइँले प्राप्त गर्नुभएकाे हुनुपर्छ । यसमा नवजात शिशु जन्मेर घरमा अाइसकेपछि घरमा गरिने अवलाेकनकाे लागि प्रयाेग हुने पुस्तिका हाे । तपाइँकाे वच्चा जन्मेपछि शुरूका दिनमा तपाइँकाे वच्चाकाे घरमा कसरी स्याहार गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनकाे लागि वडा कार्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा दक्ष विशेषज्ञहरू अाएर तपाइँलाइ गाइड गर्नेछन् । तपाइँकाे माथिकाे प्रक्रियाहरू सकिएपछि अव भिसाकाे लागि तपाइँले प्राेसेस अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्युस्सेइ ताेदाेके ज्यूरीस्याेमेइस्याे「出生届受理証明書」र वच्चाकाे नामसमेत समावेश भएकाे ज्यूमिनह्याे लिएर भिसाकाे लागि इमिग्रेसनमा जानुहाेस् । ज्यूमिनह्याे वडा कार्यालयबाट ३०० येन तिरेपछि प्राप्त गर्नुहुनेछ । वच्चा जन्मेपछि ३० दिनभित्र भिसाकाे लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले थाहा नपाएर ३० दिन कटिसकेपछि पनि भिसाकाे प्रक्रिया नगर्दा समस्या भएकाे केसहरू पनि छन् । इमिग्रेसनकाे भिसाकाे काम सकेपछि तपाइँले नेपाली राहदानीकाे लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ ।
दूतावासमा दर्ता र पासपाेर्ट निकाल्ने प्रक्रिया
तपाइँले माथिका सबै कामहरू सक्नुभएपछि वच्चाकाे पासपाेर्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकाे लागि तपाइँले नेपाली दूतावासमा राहदानीकाे अावेदन दिन पर्ने हुन्छ । तर पासपाेर्ट बनाउनकाे लागि उमेर पुगेकाे व्यक्तिको नागरिकता अनिवार्य भएजस्तै नवजात शिशुकाे लागि नावालिक प्रमाणपत्रको अावश्यकता पर्दछ तर नेपालकाे वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाहरूले दिने याे प्रमाणपत्रकाे अस्थायी प्रमाणपत्र भने दूतावासबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । याे अस्थायी प्रमाणपत्र निकाल्नकाे लागि तपाइँकाे वडा कार्यालयबाट ताेदाेकिज्यूरीस्याेमाेइस्याे निकाल्नु पर्ने हुन्छ। याे जापानी भाषामा हुने भएकाेले यसलाइ तपाइँले अंग्रेजीमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । पासपाेर्ट बनाउनकाे लागि ताेदाेकिज्यूरीस्याेमेइस्याे, यसकाे अंग्रेजी अनुवाद, अामा र वावाकाे पासपाेर्टकाे फोटोकपी, नागरिकताकाे फोटोकपी र विवाह दर्ताकाे प्रमाणपत्रकाे कपी अावश्यक पर्दछ । त्यसाे त पासपाेर्ट बनाउनकाे लागि बच्चाकाे फारमसहित दुइ प्रति फोटो पनि अावश्यक पर्नेहुन्छ । राहदानीकाे लागि अावेदन दिनुभएपछि करीव एक डेढ महिनामा तपाइँकाे वच्चाकाे पासपाेर्ट अाइपुग्छ । वच्चाकाे पासपाेर्टकाे अवधि ५ वर्षको हुनेछ भने पासपाेर्ट र अस्थायी नावालिक प्रमाणपत्रकाे शुल्क १०५०० लाग्नेछ । वच्चाकाे अर्को पासपाेर्ट बनाउनकाे लागि तपाइँकाे अस्थायी नावालिक प्रमाणपत्रले हुँदैन । नेपाल जानुभएकाे समयमा नेपालमा गर्नुपर्ने दर्ता तथा प्रमाणपत्र निकाल्ने कामहरू अनिवार्य गर्नुहाेला । जस्तै वडा कार्यालयमा वच्चाकाे जन्मदर्ता गर्ने अनि जिल्ला प्रशासनबाट नावालिक प्रमाणपत्र लिने । याे नावालिक प्रमाणपत्र भनेकाे वच्चा नागरिकता निकाल्ने उमेर नपुगेसम्म प्रयाेग हुने कागजात हाे । वच्चा जन्मेर पासपाेर्ट निकाल्न समय भएन, तत्काल नै नेपाल फर्कन पर्ने भएकाे अवस्थामा तपाइँले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । ट्राभल डकुमेन्ट नेपाल जानकाे लागि एकतर्फी अनुमति पत्र हाे । नेपालबाट पुनः जापान अाउने बेलामा अनिवार्य तपाइँले पासपाेर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । ट्राभल डकुमेन्ट प्रयाेग गरेर नेपाल फर्कंदै हुनुहुन्छ भने जापान पुनः प्रवेशकाे लागि रिइन्ट्री परमिट इमिग्रेसन गएर लिन नभुल्नुहाेला । ट्राभल डकुमेन्ट प्रयाेग गरेर नेपाल जानेका लागि अध्यायगमनमा दिइने रिइन्ट्री परमिटले हुँदैन । पासपाेर्ट बनाउन, ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनकाे लागि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी लेख्नेछाैं तबसम्म हामीलाइ हेर्दै गर्नुहाेला । धन्यवाद । तपाइँकाे जापानबसाइ सहज हाेस् ।
स्राेतः विभिन्न वडा कार्यालयका हाेमपेज/नेपाली दूतावास टाेकियाे